Myanmar Monk Student Association: ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ (၂၅)
ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာကြီးများကို ဦးပဇင်းအထူးမေတ္တာရပ်ခံ လိုတာကတော့ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ကို
အသုံးပြုကြပါ၊ ယုတ္တိ ရှိ/မရှိ စဉ်းစားကြပါ။ မျက်ကမ်းယုံမျိုး၊ မျက်ကမ်းနောက်လိုက်မျိုးတော့ မဖြစ်ကြပါစေနဲ့၊
အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်မှု၊ ယုတ္တိ ရှိ/မရှိ ဆင်ခြင်ကြပါ၊ (Blind-faith=ဘလိုင်းဖိတ်သ်) ဆိုတဲ့ အကမ်းယုံ
အရမ်းယုံကို စွန့်ပစ်ကြပါ၊ စဉ်းစားဉာဏ်ရှိသူတိုင်းဟာ ယုတ္တိကင်းတာကို ပယ်ပြီး ယုတ္တိရှိတာကိုသာ
ယုံကြည့်ကြပါတယ်။ လိုက်နာလက်ခံ ကျင့်သုံးကြပါတယ်။ ဦးပဇင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံပါလို့ မဆိုလိုပါဘူး။
သဘာဝကျကျ ဟုတ်ထိုက်/မဟုတ်ထိုက် စဉ်းစားကြဖို့ လိုပါတယ်”။
“ ကဲ … ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း တင်ပြပြီးတဲ့နောက် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ထာဝရဘုရားရဲ့ သမ္မာကျမ်းစာတွေ ယုတ္တိ ရှိ
“မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအပါအ၀င် (ကမ္ဘာဦးကျမ်း)အရ ဒီကမ္ဘာကြီးကို ခရစ်မပေါ်မှီ (၄၀၀၄)
ခုနှစ်မှ ထာဝရဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကဲ…..အဲဒါကို စဉ်းစားကြည့်
ကြရအောင်…အဲဒီခုနှစ်နှင့် အခုခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၉၃၆)ခုကို ပေါင်းထည့်လိုက်တော့ နှစ်ပေါင်း (၅၉၄၀)သာ
ဒီကမ္ဘာရဲ့ သက်တန်း ရှိတော့တယ်။ အဲဒီတော့…ဒီစကားဟာ ဘယ်လောက်မှန်သလဲဆိုတာ
ဆန်းစစ်ကြည့်ကြစို့ အခုခေတ်ပေါ် လောကဓာတ်ပညာဖြင့် များစွာဆန့်ကျင်ကွာခြားနေပါတယ် (Geology or Geologic=ဂျီဟိုလောဂျစ်)ခေါ်တဲ့ လောကဓာတ်ပညာခေါ် ပထ၀ီဗေဒဆရာများကတော့ ဒီကမ္ဘာရဲ့
အသက်ဟာ အဓွန့်ရှည်လှပြီတဲ့၊ အီဂျစ်ပြည်က (မန်မီ)လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးဖြင့်ပြုလုပ် စီရင်ထားတဲ့
လူအလောင်းကောင်း ခြောက်များဟာ နှစ်ပေါင်း (ခုနှစ်ထောင်ကျော်နှင့် ရှစ်ထောင်)ရှိပြီလို့ ဆိုကြပါတယ်။
အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်းခြောက်ထောင်ကျော်ပြီလို့ ပြောကြပါတယ်။ (အီလူရင်းန်)လို့ ခေါ်တဲ့ ကျောက်ဆောင်
များရဲ့ အသက်ဟာ နှစ်ပေါင်း (ငါးသန်းကျော်)ရှိပြီလို့ ပထ၀ီဗေဒပညာ ရှင်များက တသံတည်း
“ကဲ….ဒီတော့ကာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ကမ္ဘာဦးကျမ်းကလာတဲ့ စကားဟာ စဉ်းစားဖို့ မလိုပေဘူးလား?။
စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ ယုတ္တိကင်းမဲ့နေတာကို တွေ့ရပြီမဟုတ်လား။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းရဲ့ အဆိုကို ခရစ်ယာန်
လောကဓာတ်သိပ္ပံဆရာကြီးများကတောင် အတည်မပြုနိုင်အောင် ဖြစ်နေကြပြီ မဟုတ်လား?”။
“ပြီးတော့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ထာဝရဘုရားဟာ ကမ္ဘာဟောင်းကိုသာ ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်၊ ကမ္ဘာသစ်ဖြစ်တဲ့
တောင်အမေရိကတိုက်နှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်တို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပုံမရဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ကမ္ဘာသစ်အကြောင်း ဓမ္မဟောင်း ဓမ္မသစ်ကျမ်း နှစ်ကျမ်းလုံးမှာ အရိပ်အမြွက်မျှတောင် မပါဘဲကိုး။
ပါတယ်ဆိုရင် အထောက်အထားတိတိကျကျ ပြပါ။ ဒါ ဦးပဇင်းက ဘလိုင်း ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊
ဟောဒီမှာ ဓမ္မဟောင်းရော ဓမ္မသစ်ရော အားလုံးရှိပါတယ်။ ဘယ်အခန်းမှာ ပါတယ်ဆိုတာ ပြနိုင်ရင် ဦးပဇင်းက၀န်ချတောင်းပန်ဘို့ အသင့်ပါပဲ”။
“အမေရိကတိုက်ကို ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၄၀၀)ကျော်ရောက်ပါမှ စပိန်လူမျိုး (ခရစ်တိုဖာကိုလံဘတ်)က
သွားပြီးတွေ့တယ် မဟုတ်လား? ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေအလိုကတော့အခုထိဘယ်သူမှသိနိုင်မှာ
မဟုတ်သေးဘူး။ ထာဝရဘုရားသခင်ဟာ သူ့ရဲ့အချစ်တော်များ ဖြစ်ကြတဲ့ ဣသရေလ (ဂျုး) လူမျိုးတို့ကို
အီဂျစ်ဘုရင်(ဖာရ)ို လက်အောက်မှကယ်တင်ပြီး (ပါလိစတိန)ပါလက်စ်တိုင်းကို ပို့မယအ့် စား အဲဒီဘုရင်မလိုက်နိုင်တဲ့ ဟိုသမုဒ္ဒရာ တစ်ဘက်ကမ်းက ဘေးကင်း ရန်ကင်းဖြစ်တဲ့ အမေရိကတိုက်ကိုများ သွားပို့လိုက်ဖို့မကောင်းပေဘူးလား? သူဖန်ဆင်းတဲ့ ကမ္ဘာဆိုရင် အမေရိကဟာ အလွန်သဘာဝ ပစ္စည်းပေါများပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ နိုင်ငံကြီး မဟုတ်လား? အဲဒါကို မလုပ်ခဲ့တာကို ထောက်ခြင်းအားဖြင့် ထာဝရဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းပုံဟာ နေရာမကျသေးပါဘူး၊ မပြည့်စုံဘူးလို့ဘဲဆိုရမှာပေါ့၊ ပြီးတော့ဦးပဇင်းရဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတဲ့ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာများက ဖန်ဆင်းပုံကို တော်တော်များများ အဒဲီထာဝရဘုရား ဖန်ဆင်းပုံကလည်းတော်တော်ပဲစဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေပြန်တယ”် ။
“ဘာလဲဆိုတော့……. ဖန်ဆင်းတယ်၊ ဖန်ဆင်းတယ်နဲ့ တကယ်ပဲဖန်ဆင်းတယ်ထားပါတော့၊ အဲဒီလို
ဖန်ဆင်းတဲ့ နေရာမှာ အစီအစဉ်မတဲ့တာတွေပြောပါရစေ၊ အာဃာတသဘော မဟုတ်ပါဘူး၊
“ပထမနေ့မှာ ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတယ်၊ ဒုတိယနေ့ကျတော့ မိုးမျက်နှာကျက်ဖြစ်စေ၊
ရေနှင့်ရေခြင်း ခြားနားစေဆိုတဲ့ စကား မိန့်ကြားပြီး။ တတိယနေ့မှာ သစ်ပင်အမျိုးမျိုးကို ဖန်ဆင်းတယ်၊
စတုတ္ထနေ့မှာ နေကို ဖန်ဆင်းတယ်၊ အဲဒါ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်းပဲ၊ အဲဒီအထဲမှာနေကို မဖန်ဆင်းမှီ သစ်ပင်အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာ ထူးဆန်းမနေဘူးဘား? ဖြစ်နိုင်/မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားကြပါ၊သစ်ပင်များဟာ နေရဲ့အလင်းရောင်ကို မရဘဲမရှင်သန်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ဟောဒီ ပရသိ တ်ထဲက တောင်သူလယ်သမားတိုင်း သိပါတယ်။ ယခုကာလ လောကဓာတ်ဆရာတွေကလည်း ချက်ခြင်းလက်တွေ့ပြနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ကာ မိတ်ဆွေတို့ ထာဝရာဘုရားဟာ ဒီအစီအစဉ်မှ နားမလည်ရာ မရောက်ပေဘူးလား? စဉ်းစားကြပါ၊ ပြီးတော့ နေ မရှိဘဲနှင့် အလင်းရောင်ကို ဖန်ဆင်းတယ်တဲ့၊ ပြီးတော့သစ်ပင်မြက်ပင်များ ရှူရှိုက်ဖို့ အောက်ဆီဂျင်+နိုက်တြိုဂျင်ဓာတ်များကိုလည်း မဖန်ဆင်းခဲ့ဘူး၊ ယခုပြောရတာက မိတ်ဆွေတို့ စဉ်းစားကြဖို့သာ ပြောရတာပါ၊ အပြစ်ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး”။“နောက်တတိယအချက်က ထာဝရဘုရားရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မဆရာတစ်ယောက်က ထာဝရဘုရားဟာပုံသဏ္ဍာန်မရှိ ဂေါတမဘုရားမှာသာ ပုံသဏ္ဍန်ရှာလို့ရတယ်လို့ ဆိုသွားပါတယ်၊ ထာဝရဘုရားဟာဝိညာဉ်တော်သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့၊ ဒီမိတ်ဆွေတစ်ယောက်သာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်တိုင်း အဲဒါကိုပဲပြောလေ့ပြောထရှိကြတယ်။ ၀ိညာဉ်တော်သက်သက် သာရှိတဲ့ ထာဝရဘုရားကို ဟုတ်/မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့”။
“ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာ ဆိုထားတာက (အာဒန်နှင့်ဧ၀)ဟာ မိတ်ဆွေတို့ ပြောတဲ့ ထာဝရဘုရားကို
မြင်ဖူးကြသတဲ့၊ (နောဧ)ဟာလည်း သေသေချာချာ မြင်ရသတဲ့၊ (ရာကုတ်)ကတော့ မြင်ယုံတင်မကဘူး၊
ထာဝရနှင့် နပန်းတောင်ချကြသေးတယ်။ မိုးလင်းခါနီးကျတော့ ထာဝရဘုရားက လွတ်ခိုင်းတာကို
မလွတ်တာနဲ့ ၀ိညာဉ်တော်သက်သက် ရှိတဲ့ ထာဝရဘုရားက လက်သီးနှင့် ထိုးလိုက်လို့
ပေါင်ကျိုးသွားသေးသတဲ့၊ ကဲ…. အဲဒါ ၀ိညာဉ်သက်သက် ထာဝရဘုရားမှာ လက်သီး ဘယ်ကရသလဲ
“အီဘရာဟင်’ ဆိုတဲ့လူက သူလည်း တွေ့ဖူးပါသတဲ့၊ ဒါတင်မက တစ်နေ့မှာ ထာဝရဘုရားဟာ
‘အီဘရာဟင်’အိမ်ကို လာပြီးတော့ ညစာတောင် စားသွားပါသေးသတဲ့၊ ‘မောရှေ’ကလည်း သေသေချာချာ
မြင်ရတဲ့လူပဲ၊ အဲဒီတော့ ဓမ္မကျမ်းက ထာဝရဘုရားကို မြင်ဖူးတွေ့ဖူးသူ ငါးယောက် ရှိမနေပေဘူးလား?
ဒီလိုဆိုရင် ၀ိညာဉ်သက်သက် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို မစဉ်းစား ထိုက်ဘူးလား? စဉ်းစားကြပါ၊